Bengbu Dongli Chemical Co., Ltd. dia mpanamboatra mpitarika karazana resina fifanakalozana ion avo lenta ao Shina. Ny tsipika vokatra indostrialy Dongli dia manarona ny SAC, WAC, SBA, WBA, BED MIXED ary resina manokana miaraka amin'ny fivoahan'ny 20000MT (25000 M3) isan-taona sokajy ho sokajy indostrialy…
SBA (CL, OH, base maimaim-poana, Gel, Macroporous)
WBA (CL, OH, base maimaim-poana, Gel, Macroporous)
VOKATRA INDRINDRA TIA ANAO?
Famaritana vokatra vita amina manokana, marika, marika famantarana, ho an'ny filanao manokana.
Ny fahafaha-mamokatra feno natao ho 30000 M3, ao anatin'izany ny zavamaniry resa Cation, zavamaniry resin anion, zavamaniry resina macroporous.
Hatramin'ny faran'ny taona 2020, nahatratra 27000 M3 ny vokatra rehetra, natolotra amina kaontenera 1000 +.
Tsena any ivelany:> 80%
Tsena anatiny: <20%
Nahatratra 7,5 tapitrisa dolara ny vola azo tamin'ny varotra tamin'ny taona 2020
Ny resina cation-exchange resins dia ampiasaina amin'ny fitsaboana hyperkalaemia amin'ny alàlan'ny fanafainganana ny fahaverezan'ny potasioma amin'ny alàlan'ny tsinay, indrindra amin'ny sehatry ny poo ...